'सेक्स'का लागि कुन समय उपयुक्त ? | Jillakhabar.com
‘सेक्स’का लागि कुन समय उपयुक्त ?
१९ साउन २०७७,सोमवार
शारीरिक सम्बन्धमा सन्तुष्टिबारे मानिसका आ–आफ्नो प्रतिक्रिया हुन्छन् ।
शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्ने सबैले सन्तुष्टि पाएका हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । हतार, भय, प्रतिकुलता, खराब मुड भएको अवस्थामा राखिएको यौन सम्बन्धले सन्तुष्टि दिँदैन ।
मान्छेको कामवासनाको स्तर फरक हुन्छ भने यौन सम्बन्धमा समय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्थात् कुन समयमा तपाईं शारीरिक सम्बन्ध बनाइरहनु भएकाे छ ? त्यसले तपाईंको यौन सन्तुष्टिमा प्रभाव पार्छ ।
कतिपय दम्पती मध्यरात वा घर परिवारका सबैजना सुतिसकेपछि यौन सम्बन्ध बनाउनका लागि अनुकुल समय ठान्छन् । यद्यपी केही अध्ययनबाट यो समय यौन सम्बन्धका लागि उपयुक्त नभएको पत्ता लागेको छ ।
फ्रटियर्स इन साइकोलोजीको अध्ययनअनुसार बेलायतका धेरैजसो दम्पती रातको ९ बजेदेखि १ बजेसम्मको समयमा शारीरिक सम्बन्ध बनाउँछन् । तर अध्ययनमा उनीहरु पूर्ण रुपमा यौन सम्बन्धमा सन्तुष्ट नभएको पाइएको छ ।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा कम दम्पतीले राम्ररी यौन सुखभोग गर्न नपाएको पाइएको छ । कतिपय दम्पतीले भने रातिको समयमा यौन सम्बन्ध राख्नु दिनको समयमा काम गरेको जस्तै अनुभव भएकाले त्यसबाट चरम आनन्द लिन नसकेको बताएका छन् ।
रातको समय विश्रामको समय हो । यतिबेला हाम्रो शरीर मर्मत कार्यमा लागेको हुन्छ, जसले गर्दा भोलिका लागि आफूलाई पुनः ठीक अवस्थामा ल्याउँछ । त्यसैगरी यौनका लागि हाइ इनर्जी जरुरी हुन्छ, ताकि पर्फमेन्स राम्रो हुन सकोस् ।
मान्छेको बडी क्लक र यौन सम्पर्क गर्नुसँग सम्बन्ध जोडिएको छ । खासगरी यसले हर्मोन र उत्तेजनामा प्रभाव पार्छ । दिनभरको श्रम, थकानपछि रातको समयमा शरीर तनावमुक्त रहनका लागि विश्राम आवश्यक छ ।
त्यसकारण पनि शरीरले आराम चाहेको समयमा हुने शारीरिक सम्बन्धले सन्तुष्टि दिँदैन । यौन जीवनमा सन्तुष्टिका लागि शारीरमा इनर्जीको लेभल राम्रो हुनुपर्छ ।
बेलुका या रातिको समयमा मानिसले दिनभरको थकानका कारण पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त हुँदैन । त्यसैले बिहानको समयमा हुने यौन सम्बन्ध बढी उपयुक्त मानिन्छ ।
बिहानको समयमा बनाइने शारीरिक सम्बन्ध राम्रो मात्र हुँदैन, यसले पूर्ण सन्तुष्टि पनि दिलाउँछ । शरीरले दिनभर खर्चिएको उर्जा सञ्चय गर्ने र मर्मत गर्ने समयमा हुने शारीरिक सम्बन्ध भन्दा बिहानको समयमा हुने शारीरिक सम्बन्ध उत्तम हुन्छ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमकाे सहयाेगमा
Previous article१७ वर्षीय किशाेरले गरेका थिए ओबामालगायत सेलिब्रेटीकाे ट्वीटर ह्याक
Next articleअख्तियारका थप २० जनामा काेराेना सङ्क्रमण पुष्टि
बालबालिकालाई पूर्वीय दर्शनसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा अब्बल बनाइँदै
कुश्मिसेरा र बरेङमा कुकुर आतंक बढ्दो, मोटरसाइकललाई झम्टिँदा दुर्घटना हुने जोखिम
१८ दिनपछि खुल्यो कालीगण्डकी करिडोर, बागलुङकाे दक्षिणीभेगमा यातयात सूचारू
४ महिनाको भृण जन्माएर हत्या गरेको आरोपमा राङ्खानीकी एक महिला पक्राउ
‘निषेधाज्ञा मात्रै खुकुलाे भएको हो, कोरोना सङ्क्रमण घटेको छैन’: विज्ञ
कुश्मिसेरा उपल्लो बजारको बाटो यो बर्खा पनि हिलाम्य, असोजसम्म कालोपत्रे गरिने
१८ सय भन्दा धेरैमा काेराेना संक्रमणः२१ सय भन्दा धेरै निकाे भए,२१ जनाकाे ज्यान गयाे
१८ वर्षमाथिका सबैलाई कोरोना खोप दिइने,साउन १५ सम्म ३२ लाख भेरोसेल खाेप नेपाल आइसक्ने
एकैदिन ४३ जनाकाे ज्यान गयाेः२९३६ जनामा काेराेना संक्रमण,कुल संक्रमित ७ लाख १२हजार नाघे